Madaxda wadamada Yurub oo birri Göteborg ku kulmaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maanta khamiista ayuu boliiska magaaladan bilaabaya in ay xidhaan qaar ka mid ah waddooyinka. sawir: Johan Nilsson / TT
La daabacay torsdag 16 november 2017 kl 15.10
Birri jimcaha ayaa magaalada Göteborg laga bilaabaya shirweeyne uu ra´iisal wasaare Stefan Löfven ku soo casuumay hogaamiyaasha wadamada ka mid ah EU.
Tan ayaa degmada Göteborg culeeys weyn saartay kuna khasabtay in ay ka fekeran si ay amaanka u ilaalin lahaayeen.
Shirkan ayaa lagu qabanaya xaafada Hisingen ee magaalada Göteborg. Degmada magaaladan ayaa ka welwelsan in shirkani saameeyn doono gadiidka guud ee halkaas madama la xidhi doono qaar ka mid ah waddooyinka.
Maanta ayuu boliiska magaaladan bilaabeen in ay xidhaan qaar ka mid ah waddooyinka. Tusaale agagaarka dhismaha Svenska Mässan. Sido kale ayaa maanta marka ay hogaamiyaashu ka soo degayaan madaarka Landvetter la xidhaya ”haay- weeyga” magaalada lagu soo galo.
Sannadkii 2001 ayaa shirweeyne, u eeg ka birri la sameeyn doono, laga qabtay magaalada Göteborg. Qaar ka mid ah kuwii halkaas lagu soo casuumay ayaa ahaa madaxweeynihii hore ee Mareeykanka George W. Bush. Rabshadihii iyo banaanbaxyadii halkaas ka dhacay ayaa noqday kuwii ugu darnaa ee dalkan laga sameeyo.